भाईरल भईन्- काठमाडौंकी यति राम्री नर्स ! बिरामीले नै मलाई प्रस्ताव राख्छन् भन्दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > भाईरल भईन्- काठमाडौंकी यति राम्री नर्स ! बिरामीले नै मलाई प्रस्ताव राख्छन् भन्दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)
admin March 25, 2019 भिडियो 0
काठमाडौं- त्यसो त नर्सहरु भन्ने बित्तिकै राम्रा र सहयोगी भनेर हामीले बुझ्छौं । उनीहरुको राम्रो हेरचाह र उपचारले रिामीलाई सधैं निको हुन सहयोग पुराउँछ । नर्स पेशाप्रति धेरै युवतीहरुको चासो बढिरहेको पनि छ । यस्तै एक युवती हुन्, एलिना खड्का ।
एलिना खड्का नर्स मात्र नभै उनी कला क्षेत्रमा पनि झुकाब भएकी युवती हुन् । उनी धेरै राम्री छिन् । यति राम्री नर्स एलिना यतिबेला युट्युबमा भाईरल भैरहेकी छन् । शिशिर भण्डारीसँग पहिलो अन्तर्वार्ता दिएपछि उनको सुन्दरता र ज्ञानको तारिफ भएको छ ।
मिस भक्तपुर समेत रहेकी एलिनाले आफुलाई धेरै बिरामीले प्रस्ताव राखेको बताएकी छिन् । उनले रिामीको आमा बुवाले समेत आफुलाई बुहारी बनिदिन आग्रह गरेको खुलाईन् । हेर्नुहोस, एलिना खड्कासँगको कुराकानी ।